Ukuphupha kweMigodi Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Imayini yindawo yangaphantsi yokumbiwa kwemithombo yezimbiwa ezifana namalahle, ilitye lekalika, okanye ityuwa. Abavukuzi behla ngetonela bangena emgodini, ezinokukhokelela kumawaka amawaka eemitha ezantsi.
Kubasebenzi basezimayini, besebenza eshafini, umgodi wamalahle, umgodi okanye itonela, njengoko umgodi ukwabizwa njalo ngokokuma kwawo, kuthetha ukumba emhlabeni yonke imihla emngciphekweni wokungaphindi ukubone ukukhanya kwemini. Eyona ngozi imbi kakhulu eJamani yenzeke nge-20 kaFebruwari, 1946 eBergkamen, nalapho kwabulawa abasebenzi-mgodini abangama-405 kuqhushumbo lwangaphantsi komhlaba.
Kubantu abaninzi abakufutshane el mundo, ukumbiwa kwezimbiwa yeyona ndlela ibalulekileyo neyahlukileyo yokuziphilisa, kodwa kaninzi siva kumajelo eendaba iingozi ezinzulu zangaphantsi komhlaba, zihlala zibulala abantu abangamakhulu. Imigodi emininzi nayo iyavalwa ngokuthe ngcembe. EJamani, ngakumbi, 'ukuvalwa komgodi wamalahle' ngokuthe ngcembe kwaxoxwa kakhulu; NgoDisemba i-2018, ukumbiwa kwamalahle kwindawo yaseRuhr ekugqibeleni kwaphela. I-China, i-United States ne-Indiya zihlala zingabona bathengisi bamalahle baninzi.
Kodwa kutheni uphupha umgodi kwaye luyintoni utoliko lwamaphupha olu phawu lwephupha?
1 Uphawu lwephupha "yam" - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «yeyam» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «yeyam» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha "yam" - ukutolikwa ngokubanzi
Ukutolikwa ngokubanzi kwamaphupha, umfanekiso wephupha "lam" kufuneka usoloko ubonwa ngokunxulumana nento ekhutshwe apho phantsi komhlaba. Ukuba ubona amalahle apho, oku kuyathembisa kakhulu xa uphupha ngobomi bakho. mpu melelo kunye nobutyebi bezinto eziphathekayo. Nangona kunjalo, uphando lwamaphupha lukwathi ukuba uhlala emgodini wamalahle emgodini, kukho umngcipheko welahleko kwishishini kunye nokudana kuthando. Ukuba awuboni ngokuthe ngqo okumbiwa kulo mgodi, unokuba sebumnyameni kwimeko ethile kwilizwe leewotshi.
Qiniseka ukuba ubuyela kwiimvakalelo zakho kwindlela oziva ngayo kwimeko yamaphupha emgodini. Ndikunike awkward kwaye uqinile uvakaleloubekhona etoneleni okanye ukhe waqonda ukuba ubunzulu kangakanani phantsi komhlaba? Ukuba ungena emgodini uneemvakalelo ezimbi, kunokwenzeka ukuba ayingabo bonke abahlobo yile nto uyibonayo kubo kwaye kuya kuba bubulumko ukucinga kabini malunga nokuba ngubani omele uthembe ntoni.
Ukuba ubusebenza njengomntu ophuphayo emgodini, ukusebenza nzima kuya kuhlawula ebomini kwaye uya kuvuzwa ngemizamo yakho. Ukuba uzibona ukhupha amalahle emgodini ngomhlakulo, oku kungabonisa ukuba amandla akho Amandla agudileyo aze omnye abe buthathaka. Yonwabela ukuphumla ngakumbi kwaye ungadluli!
Ukubona ikepusi yommbiwa kungabonisa njengephupha lokuba umntu uya kuphuhlisa isakhono esiya kuba nentsingiselo ebomini.
Uphawu lwephupha «yeyam» - ukutolikwa kwengqondo
Umgodi ulele kutoliko lwengqondo lwephupha le iindawo ezimnyama ye-subconscious yethu, oko kukuthi, ngenxa yeendawo ezicinezelweyo okanye ezingathandekiyo zobuntu. Ukujonga apho, okanye ukuqhuba ungene emgodini, kunokoyikisa kwaye kuphazamise ukulala.
Ukongeza, ukuba umgodi awuhlalanga kwaye usongela ukuwa, umphefumlo walowo uchaphazelekayo awukho ibhalansi. Nangona kunjalo, ukuba iqula lizinzile phantsi komhlaba, eli phupha likwanomgaqo-siseko owomeleleyo kwaye uzinzile ngokwaneleyo ukuba ungajongana ngokwakhayo nezihlangu zengqondo yalo.
Uphawu lwephupha «yeyam» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokomoya, umfanekiso wephupha "lam" ubonisa ukuba kunokwenzeka Ukufikelela fikelela kwi-subconscious kwaye uyivavanye kancinci kancinci njengemigodi emnyama ekhanyayo.